रोबलोक्स संगीत कोडहरू - गीत आईडीहरू फेला पार्न मार्गदर्शन (डिसेम्बर २०२०) - कसरी
रोबलोक्स संगीत कोडहरू - गीत आईडीहरू फेला पार्न मार्गदर्शन (डिसेम्बर २०२०)
रोबलोक्स संगीत कोडहरू तपाईंको शीर्षकमा संगीत थप्नको लागि सजिलो तरिका हो जब उत्तम शीर्षकको मजा लिनुहुन्छ। यो खेल्न को लागी नि: शुल्क छ, र हामी सबैले रमाईलो गेमप्लेबाट रमाईलो गर्दा थोरै रमाइलो गर्न सक्दछौं। कुनै पनि संगीत, पुरानो वा नयाँ, पारम्परिक वा ईन्डी रोब्लक्समा काम गर्न सकिन्छ। सबैलाई चाहिन्छ कि अडियो रोब्लक्स संगीत डेटाबेसमा दर्ता गर्नुपर्दछ।
रोबलोक्समा खेल विकासकर्ताहरूले अडियो र स use्गीतको प्रयोग उनीहरूको खेललाई बढी आकर्षक बनाउँदछन्। तिनीहरू त्यसो पृष्ठभूमि संगीत को रूप मा अडियो जोडेको। तपाईंको गेमप्लेमा संगीत कोडहरू थप्न यो धेरै सरल छ। यस गाईडमा, हामी रोब्लक्स संगीत कोडहरूसँग सम्बन्धित सबै चीजहरू प्रदर्शन गर्नेछौं।
अधिक रोबलोक्स सम्बन्धित लेख:
रोबलोक्स प्रोमो कोड - कार्य सूची
रोब्लक्स संगीत कोड कसरी फेला पार्ने?
तपाइँको रोबलोक्स खातामा जानुहोस् र खोजी बाकसमा टाइप गर्नुहोस्। तपाईं तल विभिन्न सुझावहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ, प्रस्तावमा 'लाइब्रेरी' क्लिक गर्नुहोस्। लाइब्रेरी पृष्ठमा पसे पछि, अडियो विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले अडियो विकल्प छनौट गर्नुभयो, यसले संगीत पृष्ठमा रिडिरेक्ट गर्दछ जहाँ तपाईंलाई तल पर्याप्त संख्याका गीतहरू फेला पार्न सकिन्छ। र यदि तपाईं संगीत फाईलहरूको अभयारण्य बीचमा विशेष टुक्रा फेला पार्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यूआरएल सेक्सनमा पृष्ठको शीर्षमा आईडी पाउनुहुनेछ।
Forward-अंक नम्बर (१०-अंक कहिलेकाँही) दुई अगाडि स्ल्याशहरूको बीचमा विशिष्ट अडियोको लागि कोड हो। तपाईं गुगलमा तपाईंको मनपर्ने गीतहरूको लागि संगीत कोड ब्राउज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ रोब्लक्समा संगीत कोडहरूलाई विशेष रूपमा समर्पित वेबसाइटहरू छन्। तपाईंको मनपर्ने ट्र्याकहरूको कोडहरू फेला पार्नुहोस् र--अंकको नम्बर (वा १०-अंकको संगीत कोड) प्रतिलिपि गर्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई दुई अगाडि स्ल्याशहरू बीच टाँस्नुहोस्। अब त्यहाँ तपाई रोबलोक्स गेमि platform प्लेटफर्ममा आफ्नो विशेष तरिकाको साथ हुनुहुन्छ।
यहाँ केहि लोकप्रिय गीतहरुको लागी रोब्लक्स कोडहरु छन्।
मारुन5- 50२50555588781१ द्वारा सम्झनाहरू।
जस्टिन बीबर द्वारा बच्चा - २१58१678585।।
ड्रेक द्वारा भगवानको योजना - 1479998427।
बिस्तारै - १44१33535२१।
त्यो मलाई ब्रुनो मार्स द्वारा मनपर्दछ - 73 8873१1545453।
हमीना क्यामिला क्याबेलो द्वारा - 1464709380।
बिली इलिश द्वारा Lousy केटा - 3015811673।
हामी तपाईंलाई रानीले रक गर्नेछौं - १77 1407777740०9।
ओल्ड टाउन रोड Lil Nas X - 2931174010 द्वारा।
पाणिनी - 40 33406767404075।
मेरो दिमागमा हत्या - २२5555१ 19 2666665।
बिस्तारै - १44१33535२१
पांडा - 401059459
थन्डर -5755१66652२
विश्वासी - 650763116
हवाना - १25२25257575647।
गर्मी - 68०6855337।
मलाई हेर्नुहोस् - 5२5832525259।
मलाई यो मनपर्‍यो - २6060०324२9 3
डार्कसाइड - २१57761616140०6
लवली - 2183613911
U - 2201082543 वरिपरि हतियारहरू
भाँचिएको - 59 435911१63
आशीर्वाद - 55 455514१33२
झर्दै - २7575756२5580०
जोसलिन फ्लोरेस - 1099730877
तपाईं रोबलोक्स संगीत आईडीहरू कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
पहिले तपाईसँग बूमबक्स हुनु पर्छ। तपाइँको रोब्लक्स खेल सुरू गर्नुहोस् र प्लेटफर्ममा प्रवेश गर्नुहोस्।
थप, तपाईंको बूमबक्समा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंको छानिएको गीतको आईडी वा कोड टाइप गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईंसँग यो छ, तपाईंको संगीत बूमबक्सको माध्यमबाट चर्को छ।
यहाँ दुबै तरीकाले अपलोड गर्न र रोब्लक्समा अडियो फाईल फेला पार्न।
एक अडियो फाइल अपलोड गर्न ढाँचा:
अडियो फाईल एक एमपी file फाईल वा OGG फाईलमा अपलोड गर्न सकिन्छ, यी दुई बाहेकका फाइल प्रकारहरू सही ढ not्गले चलेको जोखिम हुन सक्छ।
अडियो फाईल अपलोड गर्नका लागि प्रक्रिया:
हामी सबै अनुकूलन संगीतको मज्जा लिन चाहन्छौं, र यो वेबसाइटमा छिट्टै गर्न सकिन्छ। रोबलोक्स संग संगीत जोड्ने एक प्रावधान छ कि तपाइँको स्वाद सूट। तपाईं सजिलैसँग विभिन्न माध्यमहरूमा सामग्री अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चरणहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो अडियो सम्पादन प्रक्रियाको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अपलोड रोबलोक्स वेबसाइट, रोबलोक्स डॉट कॉम मार्फत गरिन्छ।
तपाईं आफ्नो ब्राउजरमा गएर यसमा क्लिक गरेर सुरू गर्न सक्नुहुन्छ लिंक । यसले तपाईंलाई रोबलोक्स होम पृष्ठमा लग्नेछ। यहाँ तपाईं आफ्नो रोबलोक्स खातामा लगईन गर्न सक्नुहुनेछ। रोब्लक्स साइन अपमा काम गरेर सुरु गर्न यो एकदम सरल छ।
एकचोटि तपाईंले साइन इन गरेपछि तपाईंलाई सामान्य लगइन स्क्रिनले रोबलोक्स खाताको लागि स्वागत गर्दछ। पृष्ठको शीर्षमा सृजना आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यो वेबसाइटमा तपाइँले सिर्जनाहरूको पुस्तकालयमा लैजानुहुन्छ। यहाँ तपाईंले अडियो विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ।
एकचोटि तपाईंले अडियो विकल्प छनौट गर्नुभयो, तपाईंको संगीत फाईललाई खातामा थप्न यो सरल छ। त्यसलाई अनुसरण गर्दै, ब्राउज गर्नुहोस् र अडियो फाइल चयन गर्नुहोस्। अपलोड तपाइँको इन्टर्नेट गति को आधार मा केहि सेकेन्ड लिन्छ।
एकचोटि तपाईंले अडियो फाइल चयन गर्नुभयो भने अनुमान मूल्यमा क्लिक गर्नुहोस् रोबक्स लागत (इन-खेल मुद्रा) तपाइँको छनौट अडियो को लागी। तपाईंको पुष्टिकरण पछि, तपाईंको खरीदलाई अन्तिम रूप दिनुहोस्। तपाईको अडियो फाईल आकारलाई ध्यान दिएर रोबक्स लागत प्राय: कम हुन्छ।
एकचोटि अडियो चयन भएपछि, तपाईं भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईंको अडियो फाइल प्रयोगबाट सुरू गर्नुहोस्। यो गर्न यो धेरै सरल छ यदि तपाईंसँग आफ्नो खातामा रोबक्स छन्। प्रयोगकर्ताहरूले प्लेटफर्ममा भुक्तान गरेर रोबक्स मुद्रा थप्न सक्दछन्।अडियो सात मिनेट भन्दा कम हुनुपर्दछ, जुन २० MB भन्दा सानो छ, जुन बुझ्नको लागि स्पष्ट हुनेछ। अडियो हतार गर्न सकिँदैन, ढिलो, र यसलाई परिवर्तन गर्न सकिदैन।
अडियोको लागि लागत:
२० इन-खेल रोबक्स ० - १० सेकेन्डका लागि।
१०--30० सेकेन्डका लागि in 35 इन-गेम रोबक्स।
Seconds० इन-गेम रोबक्स seconds० सेकेन्डका लागि - २ मिनेट।
In 350० को खेल रोबक्स २ - minutes मिनेटका लागि।
अडियो को लागी लागत उचित छ, र तपाईं आफ्नो आवश्यकता अनुसार एक समझदार खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। यो तिनीहरूका लागि एक आवश्यकता हो जुन संगीत अप गर्न र आफ्ना उपकरणहरूमा चालु गर्न चाहन्छन्।
अडियो कन्फिगर गर्दै:
प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार अडियो कन्फिगर गर्न स्वतन्त्रता छ। यो केही प्रकारको संगीत सम्पादन गर्न चाहनेहरूको लागि अत्यधिक फाइदाजनक छ। हामी यो प्रयोगकर्तालाई सिफारिस गर्दछौं जसले खेल खेल्ने क्रममा उत्कृष्ट समय पाउँदछन्। यो नयाँ संगीत जाँच गर्न र तपाईंको आवश्यकता अनुसार अवस्थितको सम्पादनको लागि आदर्श हो। यहाँ तपाईंको रोब्लक्स संगीत कोडहरू कन्फिगर गर्नका लागि गाईड छन्।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो अडियो फाइल अपलोड गर्नुभयो, तपाईं कन्फिगरेसन पृष्ठमा तपाईंको संगीत अनुकूलित पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको सिर्जना प्रणालीको अडियो ट्याबमा अपलोड गरिएको फाइलको दायाँमा अवस्थित सेटिंग्स विकल्पमा जानुहोस्।
कन्फिगर पृष्ठमा विकल्पहरू छन् नाम, वर्णन, खुला टिप्पणीहरू अन / अफ, विधा, र नि: शुल्क।
नाम -यो विकल्प तपाईको अडियो फाइलको नाममा सम्पादन गर्न।
वर्णन -यो विकल्पले तपाइँको अडियो फाइलको सारांश दिन्छ।
टिप्पणीहरू सक्रिय / निस्क्रिय पार्नुहोस् -अनुकूलन गर्नुहोस् कि तपाइँको टिप्पणी खण्ड खुला छ वा छैन।
विधा -तपाईंको अडियो फाइल वर्गीकृत गर्नुहोस् ताकि अन्य व्यक्तिहरूले यसलाई फेला पार्न सक्दछन्।
नि: शुल्क बनाउनुहोस् -फाईल सबै उपयोगकर्ताहरुको लागी नि: शुल्क छ वा तपाई यो मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने छनौट गर्नुहोस्।
रोब्लक्स म्यूजिक कोड एक शानदार तरीका हो यो सुनिश्चित गर्न को लागी तपाइँ क्वालिटी अनुभव प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। गेमिलाई धेरै जोश चाहिन्छ, र यो उचित पृष्ठभूमि संगीत हुनु आवश्यक छ। यस गाईडमा, हामी बिभिन्न संगीत कोडहरूको बारेमा विस्तारमा गोता लगाउँदछौं। तपाईं तिनीहरूको प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र संगीत सुन्न एक उत्तम अनुभव हुन सक्छ। हामी केहि सब भन्दा लोकप्रिय गीतहरु को लागी Roblox संगीत कोडहरु सूचीबद्ध गर्दछौं। रोब्लक्स लाइब्रेरी तपाईलाई बिभिन्न विकल्पहरु प्रयोग गर्न को लागी ठूलो छ। सम्भावनाहरू पत्ता लगाउनुहोस् र खेलमा तपाईंको उत्तम संगीत अनुभव फेला पार्नुहोस्।
रोब्लक्स त्रुटि कोड २77 फिक्स गर्नुहोस्
पीसी को लागी उत्तम आईओएस इमुलेटर (२०२०)
नि: शुल्क स्ट्रिमि movies चलचित्रहरू कुनै साइनअप छैन डाउनलोड
शीर्ष २ free नि: शुल्क खेल स्ट्रिमिंग साइटहरू
यूट्यूब भिडियोमा mp3 रूपान्तरण गर्नुहोस्
शोटाईमटाइनिटाइम / एक्टिभेसन सक्रियता कोड
कसरी फिल्महरु नि: शुल्क पाउन को लागी
नेटफ्लिक्सका लागि उत्तम टिभी बक्स
होम फिल्म नि: शुल्क अनलाइन हेर्नुहोस्